Uru Ofufe thebọchị: Obi fortọ maka Jizọs | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Iwu Jizọs na-agba anyị ume ka anyị nwee ịnụ ọkụ n'obi Ọ na-enye anyị iwu ka anyị were obi anyị dum, mkpụrụ obi anyị dum, na ike anyị niile hụ ya n'anya (Mt 22, 37); ọ na-agwa anyị: Abụghị naanị ịdị nsọ, mana zuo oke (Mt 5:48); ọ na-enye anyị iwu ka anyị mepụta anya, ịchụ aka, ụkwụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewute anyị (Mt 18: 8); ịjụ ihe niile (Luk 14: 33) kama ịkpasu ya iwe. Olee otu irubere ya isi n’enweghi okasi?
Oge ndụ dị mkpụmkpụ na-amanye anyị ịnụ ọkụ n'obi. Ọ bụrụ na e nyere anyị ogologo ndụ ndị nna ochie, ọ bụrụ na anyị gụọ ọtụtụ narị afọ, ikekwe ịdị nwayọ na igbu oge ijere Chineke ozi ga-abụ ihe kwesịrị ngọpụ karị; ma gini bu ndu madu? Lee ka ọ si agbanahụ! Maghị na nká na-eru nso? Ọnwụ nọ n’azụ ọnụ ụzọ ... byebọchị ọma mgbe ahụ ọchịchọ, uche, ọrụ ... ihe niile abaghị uru maka ebighi ebi ebighi ebi.
Ihe atụ nke ndị ọzọ aghaghị ịkpali anyị ịnụ ọkụ n'obi. Kedu ihe ndị ahụ bi na aha ọma nke ịdị nsọ anaghị eme? Ha na-etinye onwe ha n'ọrụ ọma niile na oke ịnụ ọkụ n'obi na ịnụ ọkụ n'obi siri ike nke na omume ọma anyị na-anya isi dị n'ihu ha. Ma ọ bụrụ na i jiri onwe gị tụnyere onye a gọziri agọzi Sebastiano Valfrè, onye, ​​ugbua octogenarian, ka na-arụ ọrụ na-eri onwe ya maka ọdịmma nke ndị ọzọ, onye e mejọrọ ya vor; olee ihe na-eme ka ụgbụ a bụrụ gị!
OMUME. - Jiri obi uto na-emefu ụbọchị dum ... Tinyegharịa mgbe niile: O Sebastiano Valfrè gọziri agọzi, nweta ịnụ ọkụ n'obi gị maka m.
Nwanne nwanyị Lucia kọwara ịrara obi nke Meri nye
Nsọ ọsọ ọsọ: Machị 6, 2021
Ekpere nye Obi Dị Nsọ nke Jizọs na Fraịdee mbụ nke ọnwa
Onu ahia nye Meri: kpere maka ya
Ikwenye n'Atọ n'Ime Otu: ekpere iji jikwaa ndụ siri ike
Nsọpụrụ Chineke: ekpere jupụta gị na ndụ!